पहिलोपटक आयो कोरोनाको यस्तो आश्चर्यजनक रिपोर्ट ! मेडिसिटी अस्पतालको रिपोर्टमाथी नै प्रश्नचिन्ह
यूकेमा व्यवसाय गर्दै आएका काठमाडौं कलंकीका अनिमेश (परिवर्तीत नाम) बहिनीको बिवाहको लागि १५ दिनअघि नेपाल आएका थिए। यूके फर्कनका लागि उनले शुक्रबारको टिकट काटेका थिए।
नियमानुसार उनले आफ्नो पिसिआ रिपोर्ट देखाएर मात्र अन्र्तराष्ट्रिय उडान भर्न पाउथे। त्यसैले उनी बिहिबार ललितपुरको नख्खुस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल पुगे। त्यहाँ स्वाब दिएका उनको सोही राती उनको रिपोर्ट आयो, पोजिटिभ।
आफ्नो रिपोर्ट पोजिटिभ देखेपछी उनी तिनछक्क परे। पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ आउनु नौलो कुरा होइन, तर अनिमेषको हकमा भने यो आश्र्चयजनक मात्र होइन अविश्वसनिय नै भयो।
‘म एकपटक कोभिड लागेर निको भइसकेको मान्छे,’ अनिमेषले भने, ‘त्यसमाथि मैले यूकेमै कोभिडको सबैभन्दा राम्रो मानिने फाइजर भ्याक्सिनको दुई वटै खोप लगाएको छु।’ उनले थपे, ‘मलाई मेडिसिटीको यो रिपोर्टमाथि नै बिश्वास छैन्।’
रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछी यूकेमै कार्यरत चिकित्सक साथीलाई उनले सम्पर्क गरेर आफ्नो रिपोर्टबारे जानकाारी दिए। अनिमेषको कुरा सुनेर ति चिकित्सक समेत छक्क परिन् र अनिमेषलाई प्रतिकृया दिईन् – ‘जहासम्म मलाई थाहा छ, यो पहिलो घटना हो । यसअघि कहिले पनि मैले यस्तो थाहा पाएको थिईन्।’
ति चिकित्सकका अनुसार एकपटक कोरोना संक्रमण भएर निको भएको मान्छेलाई ६ महिनासम्म कोरोना हुने सम्भावना हुदैन्। अनिमेषलाई करिव ५ महिनाअघिमात्र कोरोना संक्रमण भएको थियो।
रिपोर्टमाथी नै प्रश्नचिन्ह !
अनिमेष अझै पनि आफुँ पुनः कोरोना पोजिटिभ भएको कुरामा बिश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। वैज्ञानिक तथ्यहरु केलाएर मात्र उनी यो अवस्थामा पुगेका हैनन्।
‘म आफैँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे हुँ,’ अनिमेषले भने – ‘पिसिआर परिक्षण गर्न खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ।’ मेडिसिटीमा आफुँ स्वाब दिन जाँदा स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत कोरोनाप्रति उदासिन पाएको उनले बताए।
उनलाई आफ्नो स्वाब अन्य कोही संक्रमितको स्वाबसँग मिसिएको शंका छ। ‘स्वाब लिने तरिका नै सुरक्षीत थिएन्। यहाँसम्मकी स्वाब लिने व्यक्तिले आफ्नो ग्ल्बस समेत परिवर्तन गरिरहेको थिएन्।’
यस बिषयमा कुरा गर्न बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा अस्पतालले बेवास्ता गरेको उनले गुनासो गरे।
कोरोनाको पछिल्लो लहर शुरु भएसँगै नेपालमा पिसिआर जाँच गराउनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। त्यसमाथी बाह्य देश जानका लागि अनिवार्य जाँच गराउनुपर्ने नियमका कारण पिसिआर जाँच गराउने अस्पताल, ल्याबहरुमा बाक्लै भिड देखिन्छ।
कोरोनाबाट जोगिने खास उपायमध्येको एक हो, सामाजिक दुरी। तर, कोरोना जाँच गर्ने ठाँउमा नै सामाजिक दुरी भन्ने शब्दको नै खिल्ली उडाएको भान हुन्छ।
बिहिबार स्वाब दिन जाने बेलामा अनिमेषले मेडिसिटीको अवस्था पनि डरलाग्दो देखे। ‘सामाजिक दुरी भन्ने के हो भन्ने नै थाहा छैन् जस्तो भिड थियो,’ अनिमेषले सुनाए – ‘कति जनासँग त मेरो भनाभन नै भयो।’
मेडिसिटीमात्र होइन प्रायः सबै ल्याब तथा अस्पतालहरुको अवस्था पनि डरमर्दो नै छ। पिसिआर परिक्षण गराउने स्थानमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने कुरामा न त सेवाग्राही सचेत छन्, न अस्पताल व्यवस्थापन नै त्यसप्रछि गम्भिर छ।
#काेराेनाभाइरस #नेपाल_मेडिसिटी_अस्पताल #लापरवाही
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८ १५:११